Ukukhishwa ku-Netflix naku-Movistar + ngo-Septhemba 2018 | Izindaba zamagajethi
Ukukhishwa ku-Netflix naku-Movistar + ngo-Septhemba 2018
Ikhathalogi engcono kakhulu yeNetflix neMovistar + kaSepthemba 2018 isilapha. Ungaphuthelwa okuthunyelwe kwethu kokuhlanganiswa ngochungechunge oluhamba phambili nama-movie eza kuNetflix naseMovistar + ngalenyanga kaSepthemba 2018.
Njengenjwayelo, sithemba ukuthi uzobekisa lokhu okuthunyelwe ngoba kuyindlela elula yokukukhumbuza okuqukethwe okuhle kakhulu Netflix kulo Septhemba. Siqala ngeplatifomu elandelwa kakhulu evame ukuletha okuqukethwe okuningi.
1 Uchungechunge olusha ku-Netflix lwangoSepthemba 2018
2 Ama-Movie amasha ku-Netflix kaSepthemba 2018
3 Uchungechunge olusha lweMovistar + lwangoSepthemba 2018
4 Ama-movie amasha eMovistar + kaSepthemba 2018
Uchungechunge olusha ku-Netflix lwangoSepthemba 2018
Lesi sigaba kulapho iNetflix ivame ukushaya khona, kulokhu kuyacaca ukuthi ngenyanga kaSepthemba lapho abantu sebeqedile ihlobo futhi bakhetha ukuqala ukuchitha amahora amaningi nINetflix bese ubanda, iliphi ikhambi uma sesivele sichithe yonke imali esiyongele amaholide ehlobo. Yingakho i-Netflix inikeza ikhathalogu enkulu futhi ephawulekayo.
Sigqamisa kulo mcimbi isizini yesithathu yochungechunge oludumile Amantombazane ekhebula ezibuyela ngomnyango omkhulu. Manje lolu chungechunge luzongena eminyakeni eyishumi entsha ngakho-ke amantombazane kuzofanele alwe nezinye izinselelo ezifanele inkathi enjalo. Ukufika kwabalingisi uYon González noMartiño Rivas kuzobungazwa kule sizini, abalingisi bayakhula ukwenza ngcono ikhwalithi yochungechunge olunabalandeli abaningi.
I-premiere ebaluleke kakhulu enyangeni yile maniac, ngesandla sikaCary Fukunaga (umdali we Umphenyi weqiniso) lapho abantu ababili abangaziwa bezobamba iqhaza esivivinyweni sezokwelapha nezemithi. Ngokusobala insolo izokwengezwa ngamaphutha wokuzijwayeza futhi inabalingisi abasezingeni eliphakeme, u-Emma Stone noJona Hill. Ngaphandle kokungabaza ukuthi ulingana no Detective True Kuzobe sekufanele amahora ambalwa kusofa. Sikushiya no amanye ama-premieres eNetflix:
I-cathedral yolwandle (kusukela ngo-01/09)
Umthakathi Omuhle - S4
Ukudubula - S3
Umlando waseTaiwan waseMadolobheni Amabili (kusukela ngo-02/09)
I-Iron Fist - T2
Okungajwayelekile - T2 (kusukela ngo-07/09)
Ungalawuleki - T2 (kusukela ngo-14/09)
I-American Vandal - T2
UBojack Horseman - T5
Kusukela ku-junkyard kuya enkazimulweni
Amakhaya Omhlaba Angajwayelekile - T2
UNorm Macdonald unombukiso
Amakhabhathi asendle noDick Strawbridge
Ngaphakathi KwamaFreemason (kusukela ngo-15/09)
Amakhosikazi Amathathu Indoda Eyodwa
U-Hisone noMasotan: ngemuva kukadrako (kusukela ngo-21/09)
AmaNorsemen - T2 (kusukela ngo-26/09)
Uhlu olumnyama - S5 (kusukela ngo-27/09)
Indawo Enhle - T3 (isahluko samasonto onke kusuka ngo-28/09)
Endaweni ethile phakathi
IMariminal - T2
UJack Whitehall: Uhamba nobaba wami - S2
Udokotela Ngubani - S10 (kusukela ngo-30/09)
I-Rupaul: Hudula amaQueens - S10
Ama-Movie amasha ku-Netflix kaSepthemba 2018
Ikhathalogi yeNetflix ngalenyanga kaSepthemba nayo ilayishwe kakhulu, kusukela ngosuku lokuqala lukaSepthemba akukho okunye futhi akukho okungaphansi Isiginali, lo mdlalo wamahlaya uzuze ukushayelwa ihlombe kwe-cinema nabagxeki, futhi inhlanganisela, uma sinaka ukuthi uCatherine Zeta-Jones naye ubamba iqhaza, kunzima ukufana.
Incomo yesibili ezingeni le-cinema eyenzelwe La La Land, omunye umsebenzi othole okungenani ukubuyekezwa okuhle kakhulu kuwo wonke ama-Oscars futhi oshiye ukunambitheka okuhle kakhulu emlonyeni wabo bonke abantu abake bawubona. Kumele sikhumbule ukuthi sibhekene nomculo, mhlawumbe awufanele kakhulu uma sifuna isenzo esithile noma ukuhleka. Idolobha laseLos Angeles ikakhulukazi lingumphefumulo wefilimu, kanye nabo bonke ubukhazikhazi obuzungezile nokuphishekela impumelelo esezingeni lekhulu lama-XNUMX.
Imizuliswano eyi-12 (kusukela ngo-01/09)
Ukuhamba Phakathi Kwamatye Amatshe
Ama-Anacondas: Ukufuna i-Bloody Orchid
UMiss Sunshine omncane
UFrankenstein nguMary Shelley
Lezo zivunguvungu zasekolishi
Linda umdanso wokugcina
I-Airbender, iqhawe lokugcina
Abesifazane Bangekhulu Lamashumi amabili (kusukela ngo-07/09)
ISierra Burgess iyisehluleki
Owesifazane obulewe kakhulu emhlabeni
Ubuhle baseMelika (kusukela ngo-11/09)
Esikhunjeni sami (kusukela ngo-12/09)
Izwe lamasiko amahle (kusukela ngo-14/09)
I-Bleach, isenzo sempilo
Umbukiso weTruman (kusukela ngo-15/09)
Eziningana (kusukela ngo-17/09)
Konakele (kusukela ngo-21/09)
Enye Intombazane yeBoleyn (kusukela ngo-27/09)
Manje siphendukela ku Movistar +, enye ingxenyekazi yokuqukethwe yokusakazwa komsindo ethandwa kakhulu ekhiqiza izembozo eziningi ngenxa yekhwalithi enhle yochungechunge lwayo. Siya lapho nezindaba ze-HBO zangoSepthemba.
Uchungechunge olusha lweMovistar + lwangoSepthemba 2018
Ezingeni lochungechunge lwabalingisi be- I-Movistar + Ngeke ikhule kakhulu ngale nyanga kaSepthemba, sicabanga ukuthi kuzoze kube ngo-Okthoba lapho ukuhunyushwa kwezinkathi ezintsha zonyaka ochungechungeni oluningi olukhubazekile njengamanje kuzoqala ukufika khona. Isikhathi sesishiyagalolunye se-tragicomedy esingapheli ngu Shameless. Igumbi elengeziwe lamahlaya nge USheldon osemncane ukuthi ngemuva kwempumelelo yayo yokuqala ibuya nesizini yesibili. Noma kunjalo, okugxilwe kukho Ukufaka, uchungechunge uJim Carrey abuyela ngalo endaweni yesehlakalo.
UKidding (kusukela ngo-09/09)
Akunamahloni - S9 (kusukela ngo-10/09)
Iqoqo leVelvet - S2 (kusuka ngomhlaka 13/09)
USheldon osemncane - S2 (kusukela ngo-25/09)
I-Lethal Weapon - S3 (kusukela ngo-26/09)
Ama-movie amasha eMovistar + kaSepthemba 2018
Kuma-movie kulapho uMovistar evame ukukhombisa khona isifuba kakhulu. Ukuzijabulisa kwama-movie kodwa ukuthi kugcwalisa kangakanani amakamelo kugqamile Kukhululwe Amashumi amahlanu Amithunzi, inothi elilandelayo lokushisa kwe-sadomaso lifika eMovistar + kusukela ngoSepthemba XNUMX olandelayo. Ngokwakhe umklomelo we-The Shape of Water Kubuye kufike ekupheleni kukaSepthemba ukusinika isikhathi esihle ekhaya cinema.
Ngibize Ngegama Lakho (kusukela ngo-02/09)
I-Pin Cushion (kusukela ngo-04/09)
I-zoo (kusuka ngo-06/09)
Kukhululwe Amashumi amahlanu Shades (kusukela ngomhlaka 07/09)
IWonder Wheel (kusukela ngomhlaka 08/09)
Iqembu (kusukela ngo-10/09)
I-King Lear (kusukela ngo-10/09)
Izikhangiso ezintathu kuma-Oututskirts (kusukela ngo-14/09)
Incwadi KaSara (kusuka ngo-15/09)
Umgijimi weMaze: Ukwelashwa Okubulalayo (kusukela ngo-21/09)
ICaveman (kusukela ngo-22/09)
Ukuma Kwamanzi (kusukela ngo-28/09)
Ukuthanda uVincent (TBD)
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ukukhishwa ku-Netflix naku-Movistar + ngo-Septhemba 2018
Ngokuya ngemininingwane yakwaGartner, uHuawei uhlwithe inkampani yesibili ngobukhulu ekhiqiza umakhalekhukhwini kwa-Apple
IXiaomi ihamba nomkhiqizo wayo omusha iPocophone F1 futhi iqhume imakethe ngenxa yenani layo